running clouds...: December 2005
When I was in Yangon, I was the only one who slept on the ferry bus among my friends.
The question they used to ask me is that, "Are you meditating??".
Now I'm meditating together with more than half of the passengers(sometimes they even sway their heads around like the chinese kids trying to learn the prayer in the movies).
I used to close my eyes and try to sleep on the train because I was so boring.
The buildings are copied and pasted across the city, things are repeated so much inaway that my pitiful eyes can't cope with, so my eyes are used to go ga-ga and closed. That's what happened.
Then big, white, electronic anaconda vomitted me alived at the place where I work .
posted by ByteOrder @ 12:17 AM2comments
I have to go to the office and installanew device server today.I need to get the jobs done before end of this month.
Last nite I heated up the converstaion with my friend,agraphic designer who is finding another job. He told me about his new year plan, barbecue, beer and friends from BEHS school. Since I already had another appointment to celebrate the new year. I sadly had to dump his plan. Quite sad,....really.
posted by ByteOrder @ 3:19 PM2comments
Just woke up at5o clock in the evening and then went out to haveadinner. Some kids are singing karaoke loudly. Quite sure that somebody will complain afterafew while.
Then walked back to home just only by myself and playedaguitar. I gonna go and watch the TV by now.
Still, I dunno how to add the colors properly .... grrrrr..!!! Now I wil try PIXA to create the background!
I don't know how to use Pixia properly, that's bad, I swear that'sagirl's picture I drew =p ..
posted by ByteOrder @ 7:37 AM2comments
Last week my mom told me that this year the rubbers are not growing very well.I have to send the money back to my mom and dad. My dad will be in Yangon in next month.
I didn't tell them I'm about to quit this job. Yeah....may be end of this month. Sometimes I just keep the things by myself,no other places to spit out the words inside.
So if I quit the job,I have to save some money to find another job within one month. Hope that everythings gonna be all right.
Yesterday I called my ex-girlfriend because I really couldn't bear the loneliness that I suffered these days. She asked me foragift. To be honest, I didn't have any idea ofagift before she reminded me, but I don't want to hurt her feelings, so I said
"Yes,I miss you, because I can't stop myself not to miss you in X'mas""
That's bad,.. I see my mom and dad faces in the air, andapicture of me sitting withahundred of applicants for the job interview , andagift for my ex-girlfriend.
Yeah.... someday, things will be better.
And today I got two sms from my closed friends,I do love them.
Yesterday I got two sms too but I gotafeeling that they were just spamming the X''mas greeting with the little nice feature called "sms to group".
Quite tired and sleepy because I was practicing the manga drawing last night.
I think I better stop it, coz I really needed to test out some opensoure frameworks keep popping out from nowhere.
That'sakind of lunatic since I dived into the world of java software developments. 90% java developers scare that they will be missing out some buzz words, and I am happend to be one of them.
posted by ByteOrder @ 8:02 PM0comments
Wow ! I gotagreeting card from my aunty. She lives in Yangon. The greeting card is really impressive. Instead of going to the places I planned to go, I stayed in home all days. That's really bad. So spend my time in scratch pad(public drawing board on the internet). I've just noticed that Japanese people can draw the things very well.
Practicing some drawing using cgiilust(A japanese scratch pad software). These days drawing and painting are the things strangley obsessed me. May be because there is no new software projects in my daily agenda,so my dying wishes to create the things are going to drawings somehow. But I know that my drawing skills are below the satisfatory level.
After filling some color
posted by ByteOrder @ 12:08 PM2comments
ကျွန်တော်တို့application ရေးတဲ့ အခါ ဘယ်အချိန်က ဘာတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာသိအောင် log ရိုက်ရတယ်။ လူတွေကတော့ blog ရိုက်ကြတယ်။ လူတွေရဲ့blog က edit လုပ်လို့ ရတယ် ။ ဒါပေမယ့်application log ကလူတွေထက်ပို ပြီး ဖြောင့်မတ်တယ် ၊ ဘာကိုမှ မဖုံးကွယ်ပဲ log ရိုက်တယ်။
Chronicle of Nania ကြည့် ဖြစ်တယ်။ မနေ့ ကပေါ့။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကျားတပိုင်း၊ လင်းယုန်တပိုင်း ကောင်ကြီးတွေပဲ။ ဒီကောင်ကြီး မိုးပေါ်ကနေ ၀ဲပြီး ပျံလာတဲ့ အချိန်မှာ ရိုက်ပြတဲ့camera shot က အရမ်းလှတယ်။
DVD ထွက်လာရင်ထပ် ကြည့် ဦးမယ်။
posted by ByteOrder @ 10:42 AM 1 comments
I said to myself, "don't haveafeeling for her,she's yr friend"
Then I said again, "but I'm so damn isolated"
Then I said agin, "You are isolated forareason"
She sat beside me today and shared her jokes, pains and agony. I hadachance to laugh my heart out at some points. Thanks...my friend.
Sometimes I do long forasoul I can shareajoke with,I do long forasoul, I could hold. I'm justahuman being after all.
But when I feel thatalot of things are needed to be done in my life and the other lives I must care for, the need for another soul beside me is being washed away. Evenasoul I cared once was being hurt for the other souls I must care. I wasasinner , I didn't even tell herareason oracause.
So I'm here writing this entry before the X-Mas is coming and the snows are falling(in the TV show that I'm watching). The coluds are fading along with the neon lights .. Merry X mas toasoul I devoted once,I love once,I hate once, it's really painful since I wish from the place that you will never know.
posted by ByteOrder @ 8:30 AM0comments
အား . . . အိပ်ချင်လာပြီ ... ။ တစ်ညလုံး computer ရှေ့ မှာထိုင်နေတာ နည်းနည်းတောင် ညီးငွေ့ လာပြီ ။ အောက်ဆင်းပြီး breakfast(tuna puff နဲ့redbull) သွားစားလိုက် ဦးမယ်။ မနေ့ က Hall Mark Channel ကလာတဲ့Silent Night ကြည့် ဖြစ်တယ်။ ဒါတခါ နဲ့ ပါဆို ကြည့် ဖြစ်တာ နှစ်ခါရှိသွားပြီ။
နေ့ လည်ကျရင် ရုံးသွားရမယ်။ Christmas ရောက်ရင် internet ပေါ်မှာ လှည့် ပတ်ပြီး နှုတ်ဆက်ရမယ်။ အခုတောင် List လုပ်ပြီး သွားပြီ ။ ခရစ်စမတ်ရောက်ရင် Zooey Deschanel ဆိုတဲ့Baby It's cold outside ကိုဖွင့်မယ်(အသံသြသြလေးနဲ့ မိုက်တယ်)။
posted by ByteOrder @ 3:10 PM 1 comments
ဒီအပိုင်းမှာတော့ Mushishi ကတစ်ခုသော မြစ်ကမ်း စပ်မှာ လွမ်းဆွေးစွာ ထိုင်နေသော shino ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ ပါတယ်။ Shino က မြစ်ကမ်း စပ်မှာထိုင်ပြီး ထူးစမ်းစွာ ပျောက်ဆုံး သွားတဲ့ သူ့ ဇနီးကို မျှော်တမ်းတာပါ။ ဇာတ်လမ်း ကဒီလို ...။
shino ရဲ့ ဇနီး
shino နဲ့ သူ့ ရဲ့ ဇနီး တို့ ဟာ ညားခါစ လင်မယားတွေ မို့shino ရဲ့မိဘတွေကို အရိုအသေပေး ဖို့ခရီးထွက်လာခဲြ့ကပါတယ်။ ဒီမြစ်ကမ်းကို ဆိုက်ရောက်ကျတဲ့ အခါမှာ shino က သူ့ ရဲ့ ဇနီးကို "နင်က နင့် အမေ က ငါနဲ့ပေးစား ထားလို့ ငါ့နောက်မလိုက်ချင်ဘူး ဆိုရင် ဒီမှာ နေခဲ့ လို့ ရတယ် " လို ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလို ကတောက်ကဆ ဖြစ်ကြတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် လှေနှစ်စီး ခွဲပြီး မြစ်ကို ကူးကြပါတယ်။ မြစ်ရဲ့ အလယ် လဲရောက်ရော ရေမြွေ တွေ ရာထောင် ချီပြီး လှေအောက် ကနေ ကူးနေတာကို ကြောက်မက်ဖွယ်မြင်ရ ပါတယ်။ shino ရဲ့ ဇနီး ပါတဲ့ လှေက လှေသမားက ကြောက်ကြောက်လန့် လန့် နဲ့ ရေထဲ ခုန်ချပါတယ်။ shino ကသူ့ ဇနီး ကို ရေထဲခုန်ချဖို့ ပြောပေမယ့်သူ့ ဇနီး က ကြောက်တော့ မခုန်ချရဲ ပဲ လှေပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်းပါသွားပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ ပဲ ရေမြွေတွေက လှိုင်းလုံး ကြီးဖြစ်သွားပြီး အရာအားလုံးကို သိမ်းကြုံးသွားပါတော့တယ်။
အသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့ တဲ့shino ကတော့ အဲဒီ တံငါရွာ အပြင်မှာပဲ နေ့ တိုင်းလွမ်းဆွေးလို့ နေပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို သိပြီး Mushishi လည်းသူ့ ခရီးကိုသူဆက်ပါတယ်။
လပေါင်း အတော်ကြာတော့ Mushishi အဲဒီတံငါရွာလေးကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ shino ကတံငါရွာလေးထဲမှာတောင်ဝင်ပြီး အခြေချနေပါပြီ ရွာသားတွေကလည်း သူ့ ကို ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်shino က သူ့ ဇနီးကို မမေ့နိုင်သေးဘူး။
ဒီတစ်ခါတော့ Mushishi က shino ကို ကူညီပြီး သူ့ ပျောက်သွားတဲ့ ဇနီး ကိုကူရှာပေးဖို့ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။
Mushishi က shino ကို သူ့ ဇနီးကို ပျောက်သွားတဲ့ အချိန်က တွေ့ ရတဲ့ အရာတွေဟာ ရေမြွေတွေ မဟုတ်ကြောင်း ၊ ကုန်းတွင်းမှ mushi တွေရေထဲ ဆင်းပြီး ရေထဲမှ mushi များနှင့် တွေ့ တဲ့ အခါမှာ ကြီးမားသော လှိုင်းကြီးတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဘယ် တံငါသည် မှ လှေမထွက်ရဲ တဲ့ မြူတွေပိန်းပိတ်နေတဲ့တစ်နေ့ မှာ Mushishi နဲ့ shino တို့ လှေထွက်ကြပါတယ်။ လှော်ရင်း လှော်ရင်း နဲ့mushi တွေ ထောင်ချီပြီး လှေအောက်ကနေကူးနေတာကို တွေ့ ကြရပါတော့တယ်။ ထူးဆန်းစွာပဲ လှေတစ်စင်း မြူတွေကြား က မြောလာတာကို တွေ့ ကြပါတယ်။ အထဲမှာ စောင်ကလေး ခေါင်းမြီး ချုံထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အိပ်ပြီး ပါလာပါတယ်။ လှေချင်းကပ်လိုက်ပြီ့း shino ကစောင်ကို အသာခွာကြည့် တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ့ မိန်းမဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ ဇနီးလေး က အိပ်နေရာ ကနေနိုးလာပြီ့း shino ကို "ရှင့် ကို စောင့် ရတာ သုံးရက်တောင်ရှိပြီး ၊ နေနိုင်လိုက်တာ " ပြောတော့ shino ရော Mushishi ရော အံ့သြ သွားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့့် shino မှာတော့ မျက်ရည်လည်ရွဲ နဲ့ ပေါ့။
မြူတွေကြား က Mushishi
Mushishi ကအခြေအနေကို ရိပ်မိသွားပြီ့း shino ကို သူ့ဇနီး လှေသွားနေတဲ့ ကမ်းဘက်အခြမ်း က ကမ်းအစစ်မဟုတ်ကြောင်းလှမ်း သတိပေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပဲ shino ရဲ့ ဇနီးဟာ mushi တွေဖြစ်သွားပြီး မြူတွေကြားမှာ လွင့် ပါသွားပါတော့တယ်။
Mushishi နဲ့shino တို့ ကမ်းခြေကို ပြန်ရောက်ကြပြီး နောက်တစ်နေ့ မှာ့ shino ဇနီး ပါသွားတဲ့ လှေကလေး သက်ရှိတစ်ယောက်မှ မပါပဲ ကမ်းခြေကို မြောလာပါတယ်။ အထဲမှာ က တော့ သူ့ ဇနီးရဲ့ ကီမိုနို လေးကိုစိတ်ထိခိုက်စရာတွေ့ ကြရပါ တယ်။ shino က စိတ် ထိခိုက်နေပေမယ့် သူ့ ရဲ့ ကျွတ်လွတ်သွား တဲ့ ဇနီး ကိုစောင့်မနေတော့ပဲ သူ့ ဘ၀ကိုရှေ့ ဆက်ပါတယ်။mushishi လည်း သူ့ ရဲ့မဆုံးသော ခရီးကိုဆက်ပါတယ်။
posted by ByteOrder @ 7:18 AM2comments
ဒီနေ့ ကံကောင်းနေတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ဘဏ်မှာ ချက်လက်မှတ် သွားထည့် ပြီး အိမ်ပြန်လာတော့ Kagome (Inuyasha ရဲ့ ဆော်လေး) figure ကောက်ရပါတယ် ။ အခု subwoofer ပေါ်မှာတင်ထား လိုက်တယ်။
ကြည့် ရတာတော်တော်မိုက်သား ။ တစ်ခါတစ်လေ LapTop လိုချင်တယ်။ ကျွန်တော့် ကွန်ပြုတာ, rukia က infra red communication မရှိတော့ handphone ပေါ်က ပုံတွေကို computer ပေါ်တင်လို့ မရဘူး။ လခထုတ် မှပဲ infra red usb ဒါမှမဟုတ် infra red pci card လေးဝယ်ရမယ်။ infra red usb က ဈေးကြီးမယ်နဲ့တူတယ်။
posted by ByteOrder @ 1:21 AM2comments
Kotetsu Isane သတင်းပို့ နေပုံ ။
Renji သွေးအလိမ်းလိမ်းဖြင့်Rukia ကိုကာကွယ်နေပုံ
Aizen ရဲ့ လျင်မြန်တဲ့ ခုတ်ချက် နှင့်အတူ Renji လဲသွားပုံ
Aizen ကို Ichigo ဒါး နှင့် ပြေးခုတ်ပုံ
Aizen နှင့် သူ့ နောက်လိုက်များ က rukia နှင့် Renji ကို SokyoKuu သတ်စင်တွင် လုပ်ကြံရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။ Aizen ရဲ့ ကောက်ကျစ်မှုကို သိရှိသွားသော တပ်မ(၄) ဂိုဏ်းချုပ် Unohara ကသူမ၏ လက်ထောက် Kotetsu Isane ကို soul society တစ်ခုလုံးသိစေရန် သတင်းပို့ ခိုင်းလေသည်(အပေါ်ဆုံးပုံ)။
SokyoKuu သတ်စင်တွင် Aizen က Rukia ကို မြေကြီးပေါ်သို့ ချလိုက်ရန်ပြောသော်လည်း ခေါင်းမာသော Renji က Aizen ကို သူ၏ နာမည်ကျော် ဒါး Zanbimaru နှင့် ခုတ်သည်။ Aizen ဒါးလှုပ်တာတောင် မမြင်လိုက်ရချေ ။ Zanbimaru အပိုင်းပိုင်း ပြတ်ကာ Renji သွေး သံရွှဲ ရွှဲနှင့် မြေပေါ်လဲတော့သည်။
Aizen က Renji ကို သေလမ်းပို့ ရန် နောက်ဆုံးဒါးချက်ဖြင့် ခုတ်လိုက်ချိန်တွင် ဒါးတစ်လက်ရောက်လာကာ Aizen ၏ဒါးကိုပင့်လိုက်သည်။ ichigo ၏ဒါးပင်ဖြစ်တော့သည်။
ichigo နှင့် Renji ပေါင်းပြီး Aizen ကိုသတ်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်ချေ။ နောက်ဆုံး ichigo နှင့်Renji တို့ သွေး ဗလပွ ဖြစ်နေချိန်တွင် Aizen က Rukia ၏လည်ပင်းမှ သံကွင်းကိုဆွဲ ကာ သူ့ အကြံအစည်နှင့် အစီအမံများကို ဖေါက်သည်ချတော့သည်။
Aizen ၏အဆိုအရ rukia ၏ ကိုယ်ထဲတွင် hollow ရှိနေပြီး ထို hollow ကိုသွင်းထား လိုက်သူမှာ ichigo ၏ဆရာ urahara ဖြစ်ကြောင်း ၊ shimigami တစ်ပိုင်း hollow တစ်ပိုင်း များသည် သာမန် shimigami များထက်ပို သော limit တစ်ခုအထိ သိုင်းပညာ ထက်မျက်နိုင်ကြောင်း ပြောပြသည်။
ထိုအချိန်တွင် ရောက်လာသူမှာ မြေခွေးတစ်ပိုင်း ဖြစ်နေသော captain Komamura ပင်ဖြစ်သည်။ Komamura က Aizen ကို သူ၏ bankai ကို သုံးကာ မြေကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲအောင် ပိုင်းတော့သည်။
posted by ByteOrder @ 3:33 AM2comments
ဒီနေ KingKong တစ်ယောက်တည်းသွားကြည့် တယ်။ ၈နာရီ ရောက်သွားပြီး ၉နာရီခွဲ ပွဲ ကိုတော်တော်စောင့်လိုက်ရတယ်ကွာ။
ကံမကောင်းချင်တော့ ပွဲစပြီး ၅ မိနစ်ကြတော့မှ ရုံထဲရောက်တယ်။ ရုံထဲမှာ လူကတော့အပြည့် ပဲ။ ဘေးနားထိုင်ခုံက ကောင်မလေးလှလှလေး မဟုတ်တော့ နည်းနည်းတောင် ဘူပိတ် သွားတယ်။ ဘေးနားထိုင်ပြီး အာလူးကြော် တဂျွပ်ဂျွပ် ထိုင်စားမဲ့ အဖွားကြီး မဟုတ်တာ တာတော်သေးတာပေါ့။
movie ကတော့ Peter Jackson ရိုက်တာလို့ မပြောရဘူး စတာနဲ့ဇာတ်ရှိန်ကို တဖြည်းဖြည်း တက်လာတယ်ကွာ။ မင်းသမီး က Naomi watt မင်းသားက နှာခေါင်းကြီးကြီး နဲ့(ငါ့လောက်တောင်ပုံမလာတဲ့ ကောင်) . မိုက်တယ်။ ရန်ကုန်တောင်ပါလိုက်သေး ။
ဇာတ်လမ်း ထဲ မှာ ပထမ စင်ကာပူကျွန်း၊ စူမာတရား ကိုသွားမယ်ဆိုပြီး ရွက်လွင့်ကြတာ နောက်ကျတော့ တစ်ကယ်ရွက်လွင့်ဖို့ ဒါရိုက်တာက ကြံစီနေတာက "အရိုးခေါင်းကျွန်း" ဆီကိုဖြစ်နေတာ။
အဲဒါနဲ့ ရန်ကုန်ကိုရေကြောင်းပြောင်းမယ်လုပ်နေရင်း "အရိုးခေါင်းကျွန်း" ဆီကို အော်တိုရောက်သွားတာ။ "အရိုးခေါင်းကျွန်း" ဆိုတာ ပုံပြင်ထဲကကျွန်း ။ သူတို့ က မဟာကံထူးရှင်ဖြစ်သွားတာ။
"အရိုးခေါင်းကျွန်း" ကလည်း နာမည်နဲ့ လိုက်ပါတယ် ။ ကျောက်ဆောင်တွေက အရိုးခေါင်းပုံစံဖြစ်နေပြီး၊ တစ်ကျွန်း လုံး လဲ အရိုးခေါင်းလေး တွေ က ပွထ နေတာ ပဲ (MC ကကျောင်းသားတွေသာ တွေ့ လိုက်ရင်အိမ် မပြန်ပဲ skull island မှာပဲနေတော့မယ်တို့ ဘာတို့ ဖြစ်ကုန်မှာ)။
ကျွန်းပေါ်မှာ ကျွမ်းဘားမတရားကျွမ်းကျင်တဲ့ လူရိုင်းတွေ နဲ့ တွေ့ ပြီး လူရိုင်း တွေက Naomi watt ကိုအရိုးခေါင်းဘယက်လှလှလေးဆွဲ ပေးပြီး ရဇ်ပွဲကြီးတစ်ခန်းတနား နဲ့ကင်းကောင် အတွက် ရစ်ဇ် ပူဇော်တယ်။ ပထမတော့ ကင်းကောင်က လူကြမ်းလေးပေါ့ ( sorry မျောက်ကြမ်းလေးပေါ့) ကောင်မလေး ကို ခါထည့် လိုက်ရမ်းထည့် လိုက်တာ တော်ရုံလူဆိုသေပြီင်္။ ကြည့် ရတာ Naomi Watt က အရိုး တော်တော်မာပုံရပါတယ်(calcium အားဆေးကြော်ငြာ ကြနေတာပဲ)
နောက်တော့လည်း မိန်းမ မာယာသဲ ကို့ ဖြာ မှကျရောက်ပြီး Naomi ကိုကယ်ဖို့ဂေါ်ဇီလာတွေ လေးကောင်နဲ့ တောင်ပြိုင် ဖိုက်တယ်။ Naomi watt အတွက်အသက်ပင်သေသေ ဖိုက်တာ ။
ယောက်ျားတွေများ မွှန်ပြီဆို ဘာမှမသိတော့ဘူး။
Naomi က Kong ကို သနားရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူကလူမျောက်ကမျောက်ဆိုတော့ မိဘတွေသဘောမတူ မှာစိုးရိမ်ပုံ ရပါတယ် ၊ နှာခေါင်းကြီး မင်းသားလေးနဲ့ kong အလစ်မှာ လင်းနို့ ခြေထောက်ကို ဆွဲ လို့ထွက်ပြေးပါတယ်။ မင်းသားလေး က Naomi ကိုလာကယ်ရတာလည်းမလွယ်ပါဘူး Sauropodomorpha တွေခြေထောက်ကြားက ပြေးလွား ပွတ်တိုက် ၊ မြေအောက် လောက်တွင်းထဲကနေခက်ခက်ခဲခဲ လွတ်မြောက်နဲ့ ပါ။
ရေးရတာပျင်းလာပြီ။ ဒါပဲ .. ဟီဟီ
Sauropodomorpha တွေခလုတ်တိုက်ပြီး တစ်ကောင်ပေါ်တစ်ကောင် ပိပြီးဆင့်နေတာ မတရားရီရတယ်။
အမေရိကန် thanks giving day မှာ ဈေးလျော့ ထားတဲ့ ipod တွေဝယ်ဖို့တို့ လူတွေတိုးဝှေ့ ပြီး ပိ တာနဲ့ တစ်ပုံစံထည်းပဲ ။
ဘာ !! မျောက်မဟုတ်ဘူးကွ kong! kong! ရုပ်ကိုသေချာကြည့် ထား
အဲဒီကောင်ကို နင်းရင် ကင်မရာမကျိုး အောင်နင်းနော် . . ကိုကို
ဟဲဟဲ ..no comments..
ဆရာ ! စက္ကူ ယူမလား !
ဟေ့ကောင် . . စက္ကူ ကဈေးကြီးတယ် ၊ တုတ်သုံးလဲဖြစ်တယ်။
posted by ByteOrder @ 9:28 AM2comments
အစ်မတော်ဘုရားကမနက်ကတည်း က shopping mall က တွန်းလှည်းဆိုင်ခန်းသွားရွေးမယ်ဆိုပြီး ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ ၀တ်လို့ဒိုးသွားလေရဲ့ ။ ဘော်ဒါ များတဲ့ သူများ သိသာတယ်၊ အားရင်ဒိုးနေတာပဲ။
နေဦး လကုန်မှ sentosa beach ကိုတစ်ယောက်တည်း adventure ထွက်မယ်။ beach မှာ camp ထိုးပြီး နှစ်သစ်ကို ကြိုဆို လိုက်ရရင်တော့ရှယ်ပဲ။
ညကျရင် အနီးအနားသွားပြီး တစ်ခုခု သွားစားဦးမှပါပဲ ။ အခုတောင်နဲနဲမှောင်နေပြီ . . . ။
ဒီနေ့ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့zawgyi-one font ကို java မှာစမ်းကြည့် နေမိတယ်။ မြန်မာတွေ programer တွေ တော်တော်များများ အားအားရှိ ဒါနဲ့ ပဲအချိန်ကုန်နေ ကြတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဆရာနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ တောင် ပြန်ဆုံတော့ ဒီအကြောင်းကို မတရားကြီးဆွေးနွေးကြပါသေးတယ်။ ပြောမယ့်သာပြောတာ ကျွန်တော် ကကြီးကနေ အထိ ဆုံးအောင်သေချာမရွတ်တတ်ဘူး ။ကျွန်တော့် ဆရာက ရရစ် တို့ရပလက် တို့ ပြောလိုက်ရင် ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်လေ နဝေတိန်တောင် ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာက စားပွဲ ခုံပေါ်မှာ လက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ဆွဲပြတော့မှ ... သြော်မှတ်မိပြီ မှတ်မိပြီ ယောင်ဝါးဝါးလိုက်လုပ်လို့ ရတယ်။ ဟဲဟဲ။
နောက်ကျတော့ ဆရာက ဗမာ font က ဗမာပြည်က လူတွေ လုပ်လိမ့်မယ် ဆိုပြီး နိဂုံးချုပ်ကြပါတယ်။
ဆရာစကားနားထောင်တာ မှားခဲ ပါတယ်။ တော်ပြီ ။ သူတို့ တွေသာလုပ်ကြပါစေတော့. . ။ ဒါပေမယ့်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတော့နောက်ကျတော့မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း "သ" ရမယ်။
posted by ByteOrder @ 1:26 AM 1 comments
မနေ့ က အစ်စရေးလ် က chief scientist နဲ့ meeting မှာတွေ့ ရတယ်။ သူက တော်တော်လေး အိုနေပြီ ။ ဒါပေမယ့် စကားပြောတာ တကယ် ပညာရှင်ဆန်ပါပေတယ်။ ကျွန်တော်တကယ် အားကျပါတယ်။ ကျွန်တော့်co-worker လေးတွေကတော့ ယုံတောင်မယုံ ကြပါဘူး။ ဒီ စပို့ ရှပ်မွဲမွဲနဲ့ လူ ကြီး က chief scientist ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့ လားပေါ့ ။
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်ဒီ ကုပနီမှာ လုပ်ရတာ တကယ်ပျင်းနေပါပြီ။ ကျွန်တော် သူများကို ခိုင်းပြီး ပိုက်ဆံယူရတဲ့ အလုပ်ကို တစ်ကယ်မပျော်ဘူး။ ခက်တာက ကျွန်တော်ခိုင်းနေတဲ့သူတွေက ပိုက်ဆံမရပဲ ကျွန်တော်ကပိုက်ဆံရနေတာ ကဆိုးတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ အရည်အချင်း ကို ဒီလို နေရာလေးမှာ မြှုပ် နှံမပြစ်ချင်ဘူးဗျာ။
့ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းကတော့ taiwan မှာ device programming တွေအရမ်းလုပ်ကြတယ်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် device တွေဆိုတာက specification တွေနဲ့ နေကြတဲ့ အရာတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့knowledge က အဲဒီပေါ်မှာ ပဲတစ်ဝဲလည်လည်ဖြစ်နေမှာ စိတ်ညစ်စရာ။
aninme ကြည့် လိုက်ဦးမယ်။ good nite . .
Magical Girl Nanoha ဆိုတဲ့ Anime လေးလေ ၊ အပိုင်း ၇ ကနေစကြည့်ရမှာ ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူး
posted by ByteOrder @ 11:10 AM0comments